Akanjo palitao → Akanjo fiasan-damba • amboradara solosaina P&M matihanina
Sweatshirtseo akaikiny io pataloha i T-shirts, no fototry ny akanjon'ny mpiasa amin'ny orinasa maro. Modely isan-karazany azo alaina avy eto aminay fivarotana mamela ny fisafidianana vokatra iray miankina amin'ny tanjony na ny safidin'ny mpampiasa.
Sweatshirts ho an'ny asa ary isan'andro amin'ny sary anao manokana
Ireo maodely natolotra dia vita amin'ny akora avo lenta, ny asany dia ny fanoherana avo indrindra ny fiasa sy ny fiarovana amin'ny toetr'andro sarotra.
Ny sweatshirts no fitaovana fototra an'ny solontenan'ny indostria maro, ao anatin'izany. fananganana, famokarana na lozisialy. Izy ireo dia manana ny fampiasana azy marobe amin'ny fananana azo ampiharina - ankoatry ny fanomezana hafanana manoloana ny rivotra na ny sery, dia mamela malalaka kokoa mihetsika ihany izy ireo noho ny palitao, na dia miaro akanjo manokana aza.
Manolotra maodely ho an'ny vanim-potoana rehetra nifanaraka tamin'ny toe-piainan'ny toetr'andro na ny mitsambikimbikinan'ny tetezamita isika mandritra ny lohataona na fararano.
Manolotra anao izahay palitao asa amin'ny vidiny isan-karazany arakaraka ny maodely - manomboka amin'ny fototra indrindra ka hanan-karena amin'ny tanjona manokana.
Izy ireo dia vita amin'ny polyester, izay manome insulation mafana kokoa, ary noho izany ny fahalalahana mihetsika bebe kokoa noho ny mahazatra palitao asa.
Ho fanampin'izay, ny ankamaroan'ny maodely dia manana vozon'akanjoko miorina amin'ny insulate thermal sy paosy azo ampiharina amin'ny ziper. Manolotra sweatshirts amin'ny loko isan-karazany izahay, miaraka amin'ny lava sy fohy tanany, ary koa amin'ny toetra fampitandremana miaraka amin'ireo singa taratra.
Akanjo mandinika dia mety amin'ny mpiasa an-dàlambe, mpiasa an-trano na mpiasa miasa aorian'ny haizina.
Akanjo miasa orinasa toy ny vary na Stedman vita amin'ny lamba mahazaka fampiasana mahery.
Mba hiarovana ireo singa tratry ny abrasion dia namboarina ho modely voafantina ireo singa mpiaro manokana. Ary koa, ny fomba sasany dia nampanan-karena ny vavahady fanamoriana mba hampihena ny hatsembohana mandritra ny fanatanjahan-tena mahery.
Ny ankamaroan'ny maodely dia manana kofehy mahazo aina amin'ny valahana sy ny hato-tanana mba hiarovana amin'ny fahavoazana amin'ny fitafiana na loto maloto.
Amidy dia: palitao volon'ondry, palitao asa, palitao polypropylene, palitao fampitandremana, akanjo ba.
Akanjo miasa miaraka amin'ny imprint dia be mpampiasa kokoa satria mitovy amin'ny endrika dokambarotra mora vidy izany. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, diniho ny fomba fanamarihana kalitao avo lenta izay manohitra ny fahasimbana, ny fihenan'ny loko ary ny fanasana mari-pana avo lenta. Izany no antony anoloranay izany ho an'ny personalization matanjaka amboradain'ny solosaina.
akanjo ba anaovan'olombelonasweatshirts miasa volon'ondry lehilahypalitao volon'ondrypalitao asaSweatshirts asa Allegropalitao asa fotsyakanjo ba ana vehivavypalitao denim asapalitao asa engelbert Strausslobaka asa julapalitao fiasana ho an'ny lehilahypalitao asa voaravakapalitao asa taratralobaka asa olxakanjo ba volon'ondryAkanjo fiasana volon'ondry Allegrotranokala lobaka asa: allegro.plpalitao miasa softshellpalitao volondavenonapalitao miasa misy hoodpalitao asa misy pirintysweatshirts miasa miaraka amin'ny pirinty Allegropalitao asa ririninapalitao asa mafanalobaka asa julaakanjo ba malalakasweatshirts miasapalitao volon'ondry miasaakanjo ba akanjo moraakanjo akanjo sweatshirts
4.9 / 5 ( 16 vato )